एउटै कोठामा ६ वटी आएपछि... - नेपाल समय
एउटै कोठामा ६ वटी आएपछि...
पहाडबाट आएको साथीले फोन गरेर भेट्न धनगढीको एउटा होटलमा बोलायो। लामो समयपछि भेट हुन लागेकाले म होटलमा पुगें। कोठामा जान होटलको सिँढी चढ्दै थिएँ, दुई युवती उभिएको देखें। मलाई देखेर एक युवतीले सोधिन्, ‘हामीलाई फोन गरेर बोलाएको तपाईंले हो ?’ त्यो सुनेर अक्कनबक्क भएँ म। ‘हैन, तिमीहरूलाई म चिन्दै–चिन्दिनँ किन बोलाउँथें र ?’
‘हामीलाई बोलाउने अनि फोन स्विच अफ गरेर बस्ने को फटाहा मान्छे रैछ ?’ गोरो अनुहार र मोटो जिउडाल भएकी अर्की युवती बोलिन्। म भने केही नबोलेर साथी बसेको कोठातिर लागें र साथीलाई भेट्नेबित्तिकै त्यो कुरा सुनाइहाले।
उनीहरूले मलाई सोधेको तरिका र हाउभाउ हेर्दा यौनकर्मी भएको सहजै अनुमान गरें। त्यो होटलमा यौनधन्दा हुने रहेछ। त्यसबारे थप जान्ने मन लाग्यो। म साथीसँग सामान्य भलाकुसारीपछि साथीलाई कोठामै छोडेर त्यहीबारे बुझ्न होटलको काउन्टरमा पुगें। केहीबेरअघि सिँढीमा भेटेका युवतीहरू काउन्टरमा बसेको देखें। उनीहरूलाई मैले सोधें, ‘के हो तपाईलाई कसले किन बोलाएको रहेछ, बोलाउने मान्छे भेट्टाउनु भएन त ?’ पातलो जिउडालकी अर्की युवती बोलिन्, ‘बोलाएको मान्छेले मोबाइल अफ गरेको छ।’
मलाई त्यहाँ हुने यौनधन्दाबारे बुझ्न इच्छा जागेर त्यहीं बसेर पत्रिका पढ्न थालें। ती युवतीहरूले मेरो अनुहारमा एकोहोरो हेरिरहेका थिएँ। चार–पाँच मिनेटसम्म दुवै युवती फोन गर्न व्यस्त थिए। सायद अघि फोन गरेर बोलाउने तिनै युवालाई हुन सक्छ फोन गर्ने प्रयास गरेको। फोन नलागेपछि एक युवती मेरो नजिक आएर बसिन्। मलाई पनि सायद होटलमा युवतीको खोजीमै आएको मान्छे हो जस्तो ठानेर होला ‘हजुर बस्नुहुन्छ त मसँग ?’ मलाई भने चिन्नु न जान्नुको ती युवतीले एक्कासि सँगै बस्ने प्रस्ताव गरेको सुनेर रिस उठेर आयो र जबाफ फर्काइहालें, ‘को हौ तिमीहरू ? किन बस्ने तिमीहरूसँग ? मलाई चिनेका छौ ? गलत धन्दा गर्ने प्रहरीलाई फोन गरेर छोप्न लगाऊँ।’ यति सुनेपछि कालोनीलो अनुहार लगाउँदै टेबुलमा राखेको झोला समात्दै साथीसहित केही नबोलेर उनी बाहिर निस्किन्।
मैले युवतीलाई भनेको कुरा काउन्टरमा बसेको मानिसले ध्यान दिएर सुनिरहेको थियो। मैले त्यही मानिसलाई सोधें, ‘होटलमा यौनधन्दा त खुलेआम हुने रहेछ हैन ?’ ‘हैन काँ हुनु, हाम्रोमा त्यस्तो हुँदैन’, उनले जबाफ फर्काए। ‘हो र ! त्यसो भए ती युवतीहरू यो रातिको समयमा होटलमा केटा खोज्दै किन आएका त ? मैले प्रश्न गरें। ‘खै सर ? मैले बोलाएको हैन, होटलमा धेरै बसेका हुन्छन्, कसले बोलायो हामीलाई थाहा हुन्न’, उनले भने।
दुई मिनेट पनि बितेको थिएन, केटाको जस्तै कपाल काटेका, कपाल पूरै रातो बनाएका, जिन्स पाइन्ट र टिसर्ट लगाएका १६–१७ वर्षजस्तै उमेरका देखिने दुई युवती होटलमा छिरे र केही नबोली सरासर माथिल्लो तलातिर लागे। त्यही काउन्टरमा बस्नेलाई मैले सोधिहालें, ‘यी युवतीहरू होटलमा कोठा लगेर बसेका ग्राहक हुन् त ?’ ‘हुन पनि सक्छन्’, उनले जबाफ फर्काए। म सरासर माथि साथी बसेको कोठामा हिँडे। अघि माथि छिरेकी ती दुई युवती र दुई पुरुष छेवैको कोठामा बसेर गफगाफ गरिरहेको झ्यालबाट स्पस्टै देखियो। युवतीको आवाज पनि सुनियो, ‘१० भन्दा तल त नाइट बस्दैनौं।’ लगत्तै एक पुरुष पनि बोले, ‘तिमीहरू आउँदैछौ भनेपछि अघि बोलाएको दुईजनालाई नभेटेरै फिर्ता पठाइदियौं। १० हुन्न खाऔंपिऔं, रमाइलो गरौं, ६ हजार दिन्छौं हुन्छ ?’ ‘ह्या हामी त्यतिमा होल नाइट बस्दैनौं, त्यसो भए भइगो हामी जान्छौं’, यति भन्दै उठेर बाहिर निस्किहालिन्।
ती युवती कोठा लिएर बसेको ग्राहक नभएर होटलको ग्राहकलाई यौन प्यास मेटाउन आएकी हुन् भन्ने निश्चित भयो। साथै होटलमा यौनधन्दा हुने रहेछ भन्नेमा पनि कुनै शंका बाँकी रहेन। अघि मलाई सिँढीमा भेट्दा तपाईंले हो बोलाउनु भएको भनेर सोध्ने युवती पनि यिनै केटाहरूले बोलाएको रहेछन् भन्ने पुष्टि भयो। साथीसँग भलाकुसारी भइरहे पनि मेरो मन भने होटलमा हुने यौनधन्दाका विषयमा केन्द्रित हुन थाल्यो।
करिब आधा घन्टा बितेको थियो, अघिको त्यही कोठामा ढकढक गर्दै खोल्नु त ढोका भनेको आवाज सुनियो। म उठेर बाहिर निस्किएँ। यसो त्यो कोठातिर नजर लगाएको त एक युवकसँगै निकै गोरो उज्यालो अनुहारका चिटिक्क परेका दुई युवती कोठाभित्र छिरे। युवती लिएर आउने युवक कोठाभित्र छिर्नेबित्तिकै बोले, ‘हेर्नुहोस् अध्यक्ष दाइ माल कस्ता छन्, धनगढीमा यस्तो माल अरु तपाईं पाउनै सक्नुहुन्न।’ केहीबेर कोठा सुनसान जस्तै भयो र कसैको आवाज सुनिएन। अलि पछि एक युवती बोलिन् र भनिन्, ‘कस्तो भोक लागेको छ केही खानेकुरा मगाउनुपर्‍यो।’‘के खाने त भन्नु न’, एक युवकको आवाज सुनियो। ‘म त कच्मली खान्छु, तिमी के खान्छौ भन’, एक युवती बोलिन् र साथीलाई मन लागेको खानेकुरा अर्डर गर्न भनिन्। खानपिनका बारेमा उनीहरूको कुरा चल्दै थियो म भने कोठाभित्र छिरेर साथीसँग भोलि भेटौंला भन्दै बिदा मागेर बाहिर निस्किएँ।
भर्खरै दुई युवती लिएर कोठाभित्र छिरेको ती युवक यौनकर्मी महिलाको व्यवस्था गर्दा रहेछन् भन्ने बुझियो। धनगढीमा हुने यौन व्यवसायबारे ती युवकसँग भेटेर कुरा गर्नुपर्छ भन्ने लाग्यो। करिब आधा घन्टा अवधिमा एउटै होटलमा ६ जना यौनकर्मी महिला देखेपछि त्यो होटल राम्रै यौनधन्दा हुने होटल रहेछ भन्नेमा मनमा कुनै दुविधा रहेन। होटलको काउन्टरमा पुगेको के थिएँ, माथिबाट खानेकुराको अर्डर ल्याएर ती युवतीसँगै कोठामा छिरेका युवक त्यही पुगें। उनी अर्डर हातमा थमाएर माथि लागे। मैले काउन्टरमा बस्ने युवकलाई सोधें, ‘तपाईंसँग त्यो केटाको मोबाइल नम्बर छ ?’ उनले नम्बर दिए।
भोलिपल्ट दिउँसोको समय उसलाई फोन गरें। पत्रकारको परिचय दिएर फोन गरेमा मैले बुझ्न चाहेको कुरा नभन्न पनि सक्छ भनेर ग्राहक नै बनेर उसलाई फोन गरेर भेट्ने प्रस्ताव राखें। उनी पनि भेट्न तयार भए। चौराहको एक नास्ता पसलमा भेट गरियो। ‘भाइ तिमीले केटीको व्यवस्था गर्दा रहेछौ। हामीलाई पनि व्यवस्था गर्न सकिन्छ त ?’ उनले कुनै हिचकिचाहट नमानी ‘हुन्छ नि कस्तो चाहिन्छ भन्नुस् न’ भनेर जबाफ फर्काए।
मलाई भन्दा पनि खासगरी थुप्रै मानिस मेरो सम्पर्कमा केटी खोज्दै आउँछन्। त्यही भएर भाइसँग कुरा गर्न खोजेको हुँ। कस्तो खालका केटीहरू छन् र कतिसम्म पैसा लिन्छन् भनेर मैले उनलाई सोधें। १५–१६ वर्षका युवतीदेखि ३५–४० वर्षका यौनकर्मी महिला आफूहरूको सम्पर्कमा रहेको उनले सुनाए। 'भर्खरका युवती एक्लाएक्लै नभएर प्रायः दुई जनाको समूहमा हिँड्ने गर्छन्। केटाहरूको कन्ट्याकमा होटलका कोठामा जान्छन् र प्रायः रातभर बस्छन्। एक जनाले कम्तीमा तीन हजारदेखि बढीमा पाँच हजारसम्म लिन्छन्। कसैले त धनगढी बाहिर पनि लैजान्छन्। त्यो बेला भने दुवैको सहमतीमा पैसा लेनदेन हुन्छ। केटी व्यवस्था गरिदिएकोमा कहिलेकाहीं केटाहरूबाट पनि पैसा पाउँछु भने केटीहरूले पनि दिन्छन्। यसैबाट आफ्नो खर्च धानिरहेको छु।' उनले बेलिविस्तार लगाए।
प्रहरीले छापा मारेर लिन्छ होला नि भन्ने प्रश्नमा उनले भने, ‘कहिलेकाहीं छापा मारेर पक्रेर पनि लैजान्छ तर केटाकेटी दुवैको सल्लाहमा कोठामा बसेमा प्रहरीको खासै डर हुन्न।’ उनका अनुसार धनगढीमा यतैको स्थानीय महिला मात्र नभएर सुदूरपश्चिमको पहाडी जिल्लाका साथै कर्णाली प्रदेश र ५ नम्बर प्रदेशका जिल्लाबाट पनि यौनकर्मी महिला पुगेका छन्।
बढ्दो सहरीकरणसँगै धनगढी, अत्तरियालगायतका ठाउँमा यौनधन्दा मौलाउँदै गएको छ। केही होटलले कामदारकै रूपमा महिला राखेर यौन व्यवसाय चलाउँदै आएका छन् भने केहीले मागका आधारमा फोन गरेर केटी बोलाएर यौनधन्दा चलाउने गरेको पाइएको छ। धनगढीका एक होटल व्यवसायीसँग कुरा गर्दा महँगो घरभाडा तिर्नका लागि खाली कोठा र खाना बेचेर मात्र रकम नपुग्ने बताउँछन्।
कैलाली प्रहरीले पहिलेपहिले सुराकीको आधारमा होटलमा छापा मारेर यौन व्यवसाय गर्ने होटल मालिकसहित पक्राउ पर्ने केटाकेटीलाई सार्वजनिक मुद्दा चलाउने गरेको थियो। अहिले भने प्रहरीले होटलमा वेश्यावृत्ति गराएको पाइएमा त्यसमा संलग्नहरुलाई मानव बेचबिखनविरुद्ध मुद्दा चलाउने गरेको छ। पछिल्लो ६ महिना अवधिमा धनगढीका होटलमा वेश्यावृत्ति गराउनेहरुलाई पक्राउ गरेर मानव बेचविबनमा मुद्दा चलाइसकेको कैलाली प्रहरी प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक आभूषण तिम्सिना बताउँछन्।
होटलमा केटाकेटी खोजेर ब्यवस्था गर्ने काम संगठित वेश्यावृत्ति भएको भन्दै उनले त्यसलाई रोक्न प्रहरी सक्रिय भए पनि समाजले सहयोग नगर्ने सुनाए। उनका अनुसार प्रहरीलाई सूचना नदिने, मुचुल्लामा सही नगरिदिने र अदालतमा आएर साक्षी बयान नगरिदिने समस्या छ।
होटल व्यवसायी संघ कैलालीका अध्यक्ष कमल बम त्यस्ता गैरकानुनी काम गर्नेहरुकै कारणले होटल व्यवसाय बदनाम भएको बताउँछन्। होटलहरुमा खुलेयाम यौन व्यवसाय हुने अस्वीकार गर्दै बमले लुकीचोरी कसैले त्यस्तो कार्य गर्छ भने सबै मिलेर निरुत्साहित पार्नुपर्ने बताए।